Kleva Nkeva - SAMSA And Eastern Cape Premier's Office Give Send off to EC youth EMbotyi
USAMSA uthumela ulutsha lwephondo emazweni
Ibhalwe ngu Luvo Mxinwa
27 Eyenkanga 2018
Ngomhla wamashumi amabini ananye kweyenkanga kunyaka ka-2018 kwingingqi yaseMbotyi, uMasipala wese Ngquza ngokubambisana kunye nenkulumbuso yase Mpuma koloni uPhumulo Masualle bebesingathe umsitho wokuthi ndlela ntle kulutsha olwaluchongiwe ukuya kufunda ngemisebenzi eyahlukeneyo eyenziwa ezinqanaweni nanjengokuba sele besiya kuphangela.
Lubalelwa kumakhulu amabini ulutsha olwaluchongwe yi-SAMSA (South African Maritime Safety Authority) ebambisene kunye ne-HARAMBEE ukuya kufunda ngemisebenzi eyenziwa ezinqanaweni ngokugunyaziswa ngumnyango wenkulumbuso.
Abenelanga kukubaqeqesha koko basose babazamela indlela yokuba basose baphangele ezinqanaweni. Umsitho ubuzinyaswe ngabahlali kunye namagosa kaRhulumente endingabala phakathi kwabo inkulumbuso yaseMpuma Koloni umnumzana P Masualle, uSodolophu waseNgquza umnumzana P Mdingi, unkosazana M Mthembu kunye nabanye endingabakhankanyanga ukuza kuthi ndlela ntle kwabo bantwana.
Kuthe ngenxa yokunqongophala kwamathuba emisebenzi, umnyango wenkulumbuso yase Mpuma koloni weza nelisu lokuncedisana noluthsa ukulwa nalombandela. Babethabathe iqela labantu abatsha baya kuqeqeshwa ngemisebenzi eyahlukeneyo eyenziwa ezinqanaweni, efana nokuthengisa, ukupheka kunye nokusebenza kumagumbi okulala. Abantu bebephume ngendlu beze kwanga ingalo kwabo bathe balufeza ugqatso lwabo.
USodolophu waseNgquza umnumzana uMdingi kunye nomnumzana P Masualle bebekho ubuqu bezokukhuza ulutsha ukuba malukhe lujonge izakhono ezinqabileyo nezinokuthi zenze utshintsho kwiindawo esiphila kuzo. Babacengile bebabongoza ngelithi mabazibandakanye neenkqubo zophuhliso bazokwazi ukuba zintoni na ezenziwayo neziyimfuneko kuluntu.
Oosingaye bebengamaqela amabini besitsho ngee ngoma ezimnandi beyolisa kuloo mnyadala betshintshana ukuphakamisa izithethi. Bezikho kwanezibongo abebezenza ukugcina umoya wabantu umxhelo mnye. Bandululwe ngamazwi enkuthazo ukuba baze baziphathe kakuhle apho bayakhona kwaye bangoneli kukuya kusebenza kumazwe asemzini/aphesheya koko bafunxe ulwazi nezakhono abazobuye baze kukhulisa ngazo uqoqosho lwelizwe laseMzantsi Afrika.
Umnumzana uMdingi obethethela abazali wondlale intetho eyala abantwana kwindlela abazakuyithabatha esinga kumazwe asemzini.
Utsho ngawakhe amazwi esithi, “Isizwe saseMzantsi sibambe ngazibini sibonga ukuziphatha kakuhle kwabantwana kwindawo apho bebeqeqeshwa khona.Hambani bantwana bomzi kantu niye emazweni ningawafulatheli amakhaya, nikhumbule ukuba apho niyakhona azikho izizalwane zenu koko nize niziphathe kakuhle.”
Ezinye zezithethi ezaziwuzimasile lomsitho ziquka uRev Msikinya, uMs Mbina Mthembu ongumlawuli jikelele kwindlu yenkulu mbuso kwi pondo lase Mpuma Koloni, kunye nosodolophu wendawo uMnu Patrick Mdingi. Wonke lamalungu neenkokheli ebezwi linye ukukhuthaza ulutsha kwiihambo zalo ezihlukileyo abazozithatha.
uRev Msikinya uthethe ngokubaluleka kokuwonga umhlaba ekuhlaleni, nokuba abantu mabavule amehlo kubantu bangaphandle abazunguzelayo lomhlaba ngeenjongo zokuthi bafuna ukuwonga kubabtu abo bawugcinele abantu basekuhlaleni. Wandula ukuthi lamanene na nenekazi makahambe esazi ukuba ashiya imihlaba ezindaweni azalwayo kuyo, lonto ithi nantoni abayenzayo ukusukela bayazi ukuba banoxanduva lokuzisa utshintso kubantu abaswele lamathuba wona bawafumeneyo.
uMphathi Jikele uMs Mbina Mthembu uphakeme ngelokuchaza ngeliphulo likhokhelwe yilendlu kankulumbuso, icandelo elihoye amadinga olutsha uHarambee, kunye nethimba lika South African Maritime Safety Authority, SAMSA ngafutshane. Eliphulo lisekwe ukuhlasela inyewe yolutsha olungafumani mathuba omsebenzi, iqondise kakhulu kwabo bangalifumana ithuba lokuya kumacandelo emfundo aphezulu kwibanga leshumi. Eliphulo lisekwe ngalamacandelo libizwa ngoba yiSea Farers. Wandule ukwazisa uluntu obelukhona ukuba, eliqela labafundi baphumayo lelesibini kweliphondo. Abokuqala baphume kunyaka ophelileyo kwaye basezindaweni zomsebenzi kwimbombo zonke zelihlbathi.
Umyalezo awudlulisileyo kwabathathi nxaxheba yeliphulo kukuxabisa umsebenzi nokungalibali imvelaphi nabantu obameleyo. Uvale ngoku gxininisa ngokubaluleka kwemfundo esithi apho baya khona bangayilibali imfundo, kuba izobanceda ukubabeka kwindawo ebhetele emisebenzini abazoba beyenza
Inkulumbuso yephondo uMnu uMasualle uphakeme ngokubulela lamasebe aphathisene nawo kweliphulo, kunye nendima ayidlalileyo ukuqeqesha nokufundisa olulutsha ukubanika izakhono zokuba bakwazi ukuthatha inxaxheba kuqoqosho lwesizwe nokuzimela, kwaye nokuncedisa intsapho ngeemfuneko zemali. Uthethe ngengxaki esihlangabezana nayo kwimeko zoqoqosho lwesizwe sethu, ukuba alukho senzandleni zethu. Sinomhlaba esingakwaziyo ukuxhamla kuwo kuba izixhobo asinazo, ngoku siphela sibukela izinto zisenziwa phambi kwethu, kumhlaba wakothu. Ukutsho oku uMnu Masualle uthi mabahambe bayofunda banzi ngezinto eziyimfuneko ukuvula amanxweme apha emampondweni, ukuquka nazo zonke izixhobo ezifanelekileyo.
Inkulumbuso ithi olu lutsha malusebenzise lamaxesha siphila kuwo, ukutshintsha iimpilo, ukusebenzisa amathuba amaninzi akhoyo. Uthi akusafani nakudala apho umntu wayethi xa ephuma esikolweni akhangele umsebenzi, ngoku kunamathuba okuqala amashishini. Uqhube ngokuthi masifunde lutho kubemi abanduluke kumazwe angaphandle, etsho ngelokuba bayakwazi ukuzenzela amathuba omsebenzi, abalindi kuqeshwa kwaye bayakwazi ukusebenzisa izakhono ukusebenzisa amathuba oqoqosho akhona apha ekuhlaleni.
Uthi njengabemi belizwe asizukwazi ukulindela ukuba yonke into mayenziwe ngurhulumente nathi kufuneka sithathe inxaxheba sibeluncedo ekukhuliseni uqoqosho lwelizwe. uMnu uMasualle uvale ngelithi urhulumente osebenza buqu awusoze ubeluncedo ukukhulisa uqoqosho kwilizwe, abantu kufuneka bengenile kuqoqosho ukunyusa inani labasebenzi abanezakhono, ukunyusa inani Labantu abaseka amashishini yonke le into ingaluncedo lukhulu ukunyusa ingxowa mali yesizwe namangeno alo. Umnu Masualle uye wathembisa kubazali ukuba uzoyilandelela lehambo yabantwana babo ukuqinisekisa ukuba baphatheke kakuhle kwihambo yabo nokuba bafumana umathuba abafaneleyo okusebenza.
Isithethi sokugqibela ibingu sodolophu uMnumzana uMdingi owandule ngokubulela inkulumbuso ngoku chonga lendawo yasentabeni yeNgquza ngoba akukholula ukuzuza amalungelo okanye iinkonzo kwiphondo kuba lendawo ibucala kwaye ikufutshane nephondo lakwaZulu Natal. Uthi lento yenzekileyo ibakalisise ukuba asilibalekanga kwaye siseyi nxalenye yeliphondo lase Mpuma Kapa. Usodolophu wacela ebongoza ukuba izinto ezifana nezi akuthethwa ngazo kakhulu, kodwa le kuyafuneka ikhankanywe mbombo zonke zelilizwe. Kubonakaliswa umsebenzi omkhulu kangaka odlalwa liphondo ukuhlaselana nolutsha olungasebenziyo. Usodolophu uvale ngokubulela amagosa endlu ka nkulumbuso wephondo, amagosa akwa SAMSA, kunye noHarambee ngomsebenzi omhle.
Umasipala weNgquza kunye nalowo wase Sajonisi banantwana abangamashushumi amathathu (30) abaphume kweli phulo lalonyaka kwabo balikhulu-namashumi asibhozo kwiphondo lonke (180). Iinkcukacha zokhangelo lwabo bathe bakhethwa azikhange zikhankanywe. (ezinkcukacha sizifumene kwicandelo lophuhliso lolutsha lwase Ingquza Hill Local Municipality). Indlu kankulumbuso wephondo khange ifumaneke ngexesha lopapasho lwalombalo.
☎ 081 367 5692